के पाकिस्तान टाट पल्टिएकै हो ? इमरानले भने : ढुकुटीमा पैसा छैन ! -
२०७६, २९ जेष्ठ बुधबार १०:०५ June 12, 2019 clickonLeaveaComment on के पाकिस्तान टाट पल्टिएकै हो ? इमरानले भने : ढुकुटीमा पैसा छैन !
पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले राष्ट्रको ढुकुटी रित्तो भएको बताएका छन्। राष्ट्रको नाममा गरेको सम्बोधनमा उनले सरकारी ढुकुटी रित्तिएको, वैदेशिक ऋणको भार बढेको बताएका छन्। उनले अर्थतन्त्र सुधार्न र विपन्नको जीवनस्तर उकास्न सबैसँग आ-आफ्ना जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक निर्वाह गर्न पनि आग्रह गरे।
यतिबेला इमरान सरकार भयानक आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ। पाकिस्तान सरकारले आज संसदमा आगामी वर्षको बजेट पेस गर्दैछ। पाकिस्तानी अर्थमन्त्रीले ३ खर्ब घाटा बजेट आज संसदमा पेस गर्ने अनुमान छ। गत वर्षको बजेट करिब २ खर्बको थियो।
उनले सबै पाकिस्तानीसँग यही जुन ३० सम्म आफ्नो सम्पत्ति घोषणा गर्नसमेत अनुरोध गरेका छन्। उनले ३० जुनसम्म अकुत सम्पत्ति, कालोधन, बेनामी सम्पत्ति÷बैंक एकाउन्ट, विदेशमा राखेको पैसा सबै घोषणा नगरे सबै कालोधन जफत गरिने चेतावनी उनले दिएका छन्।
‘एक दशकमा पाकिस्तानको ऋण ६ हजार अर्ब रुपैयाँबाट ३० हजार अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। सरकारले बर्सेनि संकलन गर्ने ४ हजार अर्ब करमध्ये आधा रकम ऋणको किस्ता तिर्दै ठिक्क हुन्छ। बाँकी राजस्वले देशको खर्च धान्न सकिन्न’,
राष्ट्रको नाममा गरेको सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री इमरानले भने, ‘विश्वभरिका देशमध्ये पाकिस्तानका बासिन्दाले सबैभन्दा थोरै कर तिर्छन् तर पाकिस्तान त्यस्तो देश हो जहाँ सबैभन्दा बढी ऋणको बोझ छ। सबै पाकिस्तानीले कर तिर्ने अठोट गरे हामी बर्सेनि १० हजार अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्न सक्छौं।’
प्रधानमन्त्री इमरानले भने, ‘म तपाईंहरू सबैसँग आग्रह गर्छु कि मैले ल्याएको सम्पत्ति घोषणा योजनामा सबै सहभागी हुनुहोस्। जबसम्म कुनै जाति आफूलाई परिवर्तन गर्न तयार हुँदैन, तबसम्म कसैले पनि उसको स्थिति सुधार्न सक्दैन भनेर कुरानमा अल्लाहले भनेका छन्। त्यसैले हामीले आफूलाई परिवर्तन गर्‍नै पर्छ। तपाईंहरूसँग अकुत, बेनामी सम्पत्ति घोषणा गर्ने समय ३० जुनसम्म छ।’
उनले सम्पत्ति घोषणा नगर्नेलाई चेतावनी दिँदै भने, ‘सरकारसँग त्यस्तो जानकारी छ, जुन यसअघि कुनै पनि सरकारसँग थिएन। विदेशमा पाकिस्तानीहरूको सम्पत्ति र विदेशी बैंकमा रकम जम्मा गरेको विवरण मसँग छ।’
उनले सरकारी निकायहरू निरन्तर विदेशमा रकम जम्मा गर्ने र अकुत सम्पत्ति थुपार्ने पाकिस्तानीबारे जानकारी संकलन गरिरहेको र त्यस्तो सबै विवरण आफूसँग भएको दाबी पनि गरे।
घट्दो विदेशी मुद्रा भण्डार
विदेशी मुद्राको भण्डार निरन्तर ओरालो लागेको छ। पाकिस्तानको विदेशी मुद्रा भण्डारमा भएजति रकम त हालै भारतमा भएको आमनिर्वाचनमा नै खर्च लाग्यो। भारतीय चुनावमा करिब ७ अर्ब अमेरिकी डलर खर्च भयो र पाकिस्तानसँग अहिले त्यति नै विदेशी मुद्राको सञ्चय बाँकी छ।
निर्यात शून्यजस्तै भएकाले त्यहाँ महँगी पनि अकासिएको छ। राजस्व घाटा चुलिएर सगरमाथा छुन लागेको छ भने भुक्तानी सन्तुलन पनि असन्तुलित छ। ऋण लिनुको साटो आत्महत्या गर्छु भन्ने इमरानले अन्ततः आइएमएफको शरण लिनु पर्‍यो।
आयातमा पाकिस्तानको अत्यधिक खर्च भैरहेको छ तर निर्यात शून्यजस्तै छ। पाकिस्तानले अब पनि अर्थतन्त्र सुधार्न नसके टाट पल्टिन सक्ने जोखिम अझै बढ्नेछ।
सन् २०१५ मा पाकिस्तानको चालु खाताको घाटा २ अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर थियो भने बढेर गत वर्ष १८ अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर पुग्यो। चालु खाताको घाटाका कारण पाकिस्तानको व्यापार घाटा पनि बढ्दै छ।
विश्वकपमा रोनाल्डोको पहिलो ह्याट्रिक , स्पेन र पोर्चुगलको खेल ३-३ ले बराबरी मा टुङियो
२०७५, २ असार शनिबार ०२:३४ June 16, 2018 clickon
वासिङ्गटन पोस्टका पत्रकार जमाल खसोग्गीको शव भेटीयो, त्यो पनी साउदी राजदूतको घरको बगैँचा मा
२०७५, ७ कार्तिक बुधबार ०३:४६ October 24, 2018 clickon
भारत को बोर्डर नजिक तिब्बत मा चिन द्वारा इलेक्ट्रोमैग्नेट रकेट तैनात गर्ने, खतरा बढने भयो।
२०७५, २५ श्रावण शुक्रबार ००:४० August 10, 2018 clickon